DAAWO SAWIRADA:- Ciidamada Amaanka Gaalkacyo oo soo qab qabtay dad aan sooneen. - Hablaha Media Network
DAAWO SAWIRADA:- Ciidamada Amaanka Gaalkacyo oo soo qab qabtay dad aan sooneen.
HMN:- Ciidama Amaanka Magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa Sameeyay Howl-gal ka dhan ah ma soo mayaasha ah waxaana lagu soo qab qabtay ilaa 15 ruux oo la sheegay in aysan sooneen.
Saraakiisha Amaanka Gaalkacyo ayaa sheegay in ay heleen warbixin ku saabsan dadkaan ma soo mayaasha ah in ay ku dhax nool yihiin Xaafadaha Magaalaada Gaalakcyo Islamarkaana ay saakay u suurta gashay in ay soo qab qabtaan.
Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Maxamud Yaasiin Tumey ayaa bartiisa facebookga soo dhigay natiijada howlgalkaan oo si gaar ah looga Fuliyay xaafadaha magaalada iyadoo diirada la saarayo ma soomayaasha iyo dadka cuntada kariya xiliga soonka.
Maamulka Gaalkacyo ayaa balan qaaday in ay sii wadi doonaan Howlgalka nuucaan oo kala ah oo ay kula dagaalamayaan kooxaha ma soo mayaasha ah ee ku nool deegaanada Puntland.